क–कसका दुश्मन हुन् प्रचण्ड ? फेसबुकमा यस्तो भयो भाइरल – Everest Dainik – News from Nepal
क–कसका दुश्मन हुन् प्रचण्ड ? फेसबुकमा यस्तो भयो भाइरल
काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो तीन दशक प्रचण्ड निर्णायक भूमिकामा देखिएका छन् । २०५२ सालमा सशस्त्र जनयुद्दको नेतृत्व गरेपछि प्रचण्डमाथिको चासो र चर्चा चुलिएको हो ।
शान्ति प्रक्रिया हुँदा बहुदल स्वीकार्ने दलहरुका तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही नेताको छविमा प्रचण्ड निर्णायक देखिए । शान्ति प्रक्रियामा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन मार्फत प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड संविधान निर्माण हुँदै पार्टी एकतासम्म पनि चर्चामा नै छन ।
सधै गतिशील जीवन र राजनीति मन पराउने प्रचण्ड अहिले नेकपाका अध्यक्ष बनेका छन् । पार्टीलाई संसदवादबाट माथि उठाएर समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्वकर्ता बनाउने अभियानमा अहिले उनी लागेका छन् ।
प्रचण्डले यथास्थिति स्वीकार नगरेकै कारण समकक्षी र अन्यबाट उनी आलोचित समेत हुँदै आएका छन् । यही विषयलाई व्यंग गरेर अहिले फेसबुमा एउटा पोष्ट निकै भाइरल भएको छ । उक्त पोष्टमा प्रचण्डलाई कस कसले दुश्मन मान्छन् त भन्ने लेखिएको छ ।
पढनुस भाइरल भएको पोष्टमा के छ ?
शेरबहादुर देउवाको दुस्मन-प्रचण्ड
बाबुरामको दुस्मन- प्रचण्ड
मोहन वैद्यको दुस्मन- प्रचण्ड
विप्लवको दुस्मन- प्रचण्ड
कमल थापाको दुस्मन- प्रचण्ड
ज्ञानेन्द्र शाहको दुस्मन- प्रचण्ड
रुक्मंग्वाल कटुवालको दुस्मन-प्रचण्ड
नवराज सिलवालको दुस्मन-प्रचण्ड
शुशिला कार्कीको दुस्मन-प्रचण्ड
चित्रबहादुर के.सि को दुस्मन-प्रचण्ड
नारायणमान बिजुक्छेको दुस्मन-प्रचण्ड
मोहन बिक्रम सिहको दुस्मन-प्रचण्ड
सिपि मैनालीको दुस्मन -प्रचण्ड
डलरवादि पत्रकारको दुस्मन-प्रचण्ड
बिस्तारबाद भारतको दुस्मन-प्रचण्ड
साम्राज्यबाद अमेरिकाको दुस्मन-प्रचण्ड
दुस्मनै दुश्मन ले घेरिएको प्रचण्ड, प्रचण्ड अवसरवादी कि प्रचण्ड पुजीबादी कि प्रचण्ड ताना शाही कि प्रचण्ड रुढिबादी कि प्रचण्ड आतंकबादी कि प्रचण्ड फासिवादी कि प्रचण्ड क्रान्ति बिरोधि कि प्रचण्ड दलाल कि प्रचण्ड भ्रस्टाचारी कि के हो प्रचण्ड !
प्रचण्ड क्रान्तिको अर्को नाम हो प्रचण्ड भौतिक रुपमा ढले पनि अब प्रतिक्रियाबादीहरु ले खुशी हुनु पर्ने कुनै कारण देख्दिन किन कि प्रचण्ड खोज्नु छ भने दलित बस्तिमा जाउ, प्रचण्ड जनजाती बीच छ प्रचण्ड आदिबासि बीच छ, प्रचण्ड अल्पसंख्यक बीच छ , प्रचण्ड मदेसी बीच छ, प्रचण्ड सोसित पिडित बीच छ, प्रचण्ड सर्बहारा वर्गका मन मन मा छ त्यस कारण प्रचण्ड महान छ रास्ट्र नायक छ!!